Ukuthotyelwa Kwezithuthi zeBot kunye neZingcebiso ze-Semalt
Akuyi kuphutha ukutsho ukuba i-automation iye yanceda amashishini amaninzi ukuba asebenze ngokukhuselekileyo nakhuseleko kwi-intanethi. Ziyindlela ekhuselekileyo nelula yokukhusela imisebenzi yobuqhetseba ngokubanzi kwaye inokukunceda ukwandisa inzuzo yakho. Ingqungquthela yenziwa ngeendlela eziliqela kunye nokudibanisa kunye. Ubuthakathaka beBot buveliswa kwiziqhagamshelo ezihambelanayo, ezingenanto kwaye azikwazi ukukuqinisekisa iziphumo ezifunwayo - high pr blogging sitesi.
u-Alexander Peresunko, uSomalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi namhlanje kuye kwafuneka ukuba bonke abashishini bachonge, bahlalutye, bavavanye, baphinde balahle i-bake bot. Ukuba unayo iiprogram ezinxulumeneyo kunye nabathengisi abafuna ukuhamba kwezinto zangempela, ngoko kuba kubalulekile kuwe ukuba ulahlekise i-traffic fake kunye ne-bots, ukubonelela abathengi bakho ngeendlela ezisemthethweni kunye nezengqondo. Ukuba awukwazi ukwenza njalo, i-bots izakukhawuleza ihluthe imali kwiwebhusayithi yakho, ingabuyi nto ngaphandle kokuzisola. Imisebenzi eyahlukeneyo inokufezekiswa ukuba iindwendwe zakho aziveli kwiinkqubo ezenzekelayo okanye kwi-bots. Yenze ibe yinyani kwaye ivumelekile njengoko le yindlela kuphela yokuphumelela ukuthembela kwabathengi bakho. Makheke apha ndikuxelele ukuba i-bots yenkohliso kunye neendlela eziphantsi kwezithuthi azikwazi ukuvelisa nayiphi na intengiso okanye isitshixo soshishino lakho. Kungenxa yokuba izinga lokunciphisa nabo liphezulu kakhulu kwaye abanakuze bancede abanini bewebhu.
Ngamafutshane, kunyanzelekile ukuba sonke senze i-traffic yangempela kwaye sithinte ukufika kwebhodi. Ukuthengiswa kokubambisana kuye kwadlula iminyaka kwaye ikhule kunye nexesha. Kukho iinkxalabo eziqhubekayo malunga nemisebenzi yobuqhetseba kunye neendlela zobuqili ezisetyenziselwa ngababambisene, ukukrazula imali kubathengisi. Ukuba uzimisele ngokuthatha ibhizinisi lakho kwinqanaba elilandelayo, akufanele uthabathe imali kubathengisi bakho ngokusekelwe kwi-bots yakho kunye ne-fake traffic. Bonke abasebenzisi mabazame ukuvelisa ukuthengisa kwangempela kwaye bayeke ukuthembela ekutyeleleni okwenene. Ukuthumela i-traffic bogus kumaphepha akho ewebhu okanye iifowuni ezihambelanayo aziyi kukufumana nayiphi na intengiso. Kunoko, inokutshabalalisa ukubonakala kwewebhu lakho. Ukuba i-Google Analytics ibonisa i-bots kunye nezothutho lwezithuthi njengokwenene, lixesha lokuvimba ezo dilesi ze-IP ngokukhawuleza. Abambisene nabo bazithengela izithuthi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ngokuhlawula iidola ezimbalwa kwaye bahlasele ii-sites kunye neziqhagamshelo ezihambelanayo kunye nokuvakasha kunye nokuhanjelwa okungenakuguqulwa ekuthengiseni.
I-bots kunye nezixhobo ezahlukeneyo ziyafumaneka ukwenzela ukuvelisa i-fake traffic. Le ndlela kunye nezi zihlandlo azikwazi ukuvelisa imbono yabantu yangempela kwiwebhusayithi yakho. Ziye zaveliswa ngeenkqubo ze-bot eziqhubeka zihlaziya ii-site nganye ngomzuzu. Ngaloo ndlela, kubalulekile ukufumanisa i-bots kunye nokuyilahla. Phantse bonke abathengisi ababambisene nabo basebenzise la mabhubhu ukuze bafumane amaninzi emotweni kumaphepha abo ewebhu, kodwa abakwazi ukufumana nayiphi na intengiso kwaye bachithe idumela labo kwi-intanethi ngenxa yale mi sebenzi. Kufuneka uqhagamshelane ne-IT ingcali malunga nale mbandela kunye nendlela yokulahla ngayo.